Magaalooyinka Kanada ee Cimilada ugu Wanaagsan | Safarka Absolut
Kanada waa waddan aad u ballaadhan, oo leh qaab-dhismeed aad u kala duwan sidaa darteed in aysan jirin hal cimilo oo Kanadiyaan ah.'Gobollada xeebta way ka duwan yihiin cowska iyo gobollada buuraleyda ee galbeedka, sidaas darteed heerkulka iyo waqtiga aan ka heli karno isla maalintaas goobo kala duwan aad ayey uga duwan yihiin aagga jiqda ah ee bariga. ¿Waa kuwee magaalooyin ka mid ah Kanada kuwa loogu tala galay booqashada sida ku xusan waqtiga sanadka?
Maajo ilaa Sebtember guud ahaan waa xilliyada ay isticmaalaan dadweynaha Kanada iyo dalxiiska kaamamaynta iyo u safridda bannaanka; Mid kasta oo ka mid ah bilaha taariikhahaas waxaad u safri kartaa meel kasta oo aad weli ku faraxsan tahay, in kastoo, aad dareemeyso kororka heerkulka, maaddaama ay u muuqdaan inay iska beddelayaan seeraha, oo ah meesha ugu horreysa ee ay kululaaneyso bilowga sanadka taasi way sii kululaan doontaa hadhow, iyadoo ah barafka iyo xilliga barafka inta u dhexeysa Nofeembar iyo Maarso, waana la dheereyn karaa ilaa Abriil iyadoo kuxiran roobabka iyo / ama duufaanka.
1 Xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan cimilada Kanada
2 Magaalooyinka ugu Kulul Kanada Inta lagu jiro Jiilaalka
3 Iyo xagaaga? Magaalooyinka Kanada oo leh cimilada ugu qabow
Xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan cimilada Kanada
Kanada waa waddanka ugu qabow, oo la tartamaysa Ruushka markii ugu horreysay oo ah waddanka ugu qabow adduunka, oo leh celcelis ahaan heerkul maalinle ah -5 / -6ºC.
Dad badan oo reer Kanada ah ayaa u dhinta sannad kasta soo-gaadhista heerkulka daran ee daran marka loo eego dhacdooyinka kale ee dabiiciga ah, sida lagu sheegay xogta laga soo xigtay tirakoobka Kanada. Celcelis ahaan 108 qof ayaa sannad kasta u dhinta hargabka, halka 17 keliya ay u dhintaan dhacdooyin kale oo la xiriira dabeecadda.
Bangiyada Waaweyn ee Newfoundland waxaa loo arkaa Meelaha ugu fog adduunka. Aaggu waa 40 boqolkiiba daboolay ceeryaamo xilliga qaboobaha iyo ilaa 84 boqolkiiba xagaaga.
Ummad shaki la’aan caan ku ah iyada Cimilo cusubWaxay umuuqataa wax xoogaa layaab leh in dadka reer Canada ay ahaayeen kuwa allifay tusmada UV, cabirka cabirka cadceedda shucaaca ultraviolet-ka ee qoraxda. Markuu UV kordho, falaadhaha qorraxdu waxay waxyeelo badan u geysan karaan maqaarka, indhaha, iyo habka difaaca jirka. Sanadkii 1992, Saynisyahannada Deegaanka Kanada soosaaray tusmada oo ah aalad lagu ilaaliyo caafimaadka dadka reer Kanada, waxaana hada loo isticmaalaa ilaa 48 goobood oo wadanka ah.
Waxaa Kanada ka jirta maahmaah oraneysa "Haddii aadan jeclayn cimilada, sug shan daqiiqo." Marnaba ma ka run badnaan laheyd tan Biraha Creek, Alberta; halkaas oo laga duubay isbeddelka heerkulka ugu daran ee taariikhda Kanada: meerkuridu waxay ka kacday -19ºC ilaa 22ºC sidaas darteed mid kaliya saac.
Marka xigta waan ogaan doonaa kuwaas oo ah magaalooyinka ugu diiran Kanada inta lagu jiro xilliga qaboobaha ama kuwa qabow inta lagu jiro xilliga kuleylaha, sidaa darteed waxaan qorsheyn karnaa dariiqeenna iyadoo kuxiran waqtiga sanadka aan booqanno dalka.
Magaalooyinka ugu Kulul Kanada Inta lagu jiro Jiilaalka
Si loo helo cimilo diiran inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee Kanada, magaalada weyn ee aan ka heli karno dhanka bari ee Buuraha Rocky, taas oo u adeegta caqabadda ugu fiican ee haysata kuleylka qorraxda bilahaas xilligan, saddexda magaalo ee waaweyn ee koonfur-galbeed british columbia kaamil ah si loo helo waxa aan raadineyno waa: Victoria, Vancouver iyo Abbotsford.
Magaalooyinkan Kanada markasta Waxaan heli doonnaa habeenno qabow oo diirran oo qabow marka loo eego qaybo badan oo dalka ka mid ah, maalmo yar oo dhaxan leh iyo habeenno leh heer-kul hoose oo yar.
Qaybaha kale ee Kanada, magaalooyinka ugu kulul xagaaga ayaa ku yaal Gobolka Kanada ee Ontaariyo iyo gobollada badda. Iyaga ka mid ah, Magaalooyinka Ontaariyo ee Toronto, Windsor iyo St. Catherines, kaas oo u taagan helitaanka cimilo jiilaal oo si joogto ah uga diirran kuwa kale.
Fiktooriya, waa magaalada ugu horeysa muran la’aanta magaalooyinka waaweyn ee Kanada diirimaad xilliga jiilaalka Waa dhowr darajo iyo maalmo ka sarreeya kuwa kale cimilo diiran awgeed. Fiktooriya waa magaalada kaliya ee Kanadiyaan ah oo baaxad weyn leh oo u ogolaaneysa in heer kulka caadi ahaan uusan hoos uga dhicin -10 darajo Celsius (14 darajo Fahrenheit) xilliga qaboobaha.
Iyo xagaaga? Magaalooyinka Kanada oo leh cimilada ugu qabow
Saint John ee Newfoundland Waa magaalada ugu muhiimsan Kanada haddii aan ka hadalno magaalooyinka leh cimilada ugu qabow xilliga xagaaga. Waxay leedahay heerkulka celceliska ugu hooseeya maalin kasta waxayna heshaa maalmaha ugu yar ee aadka u kulul bilaha Juun, Julaay iyo Ogast.
Brunswick cusub, ma aha oo kaliya mid kale oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Kanada, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo cabirka heerkulka xagaaga si loo xisaabiyo celceliska ugu hooseeya ee dalka iyo maalmaha ugu yar ee kulul.
Sidoo kale si joogto ah tobanka ugu sareeya dhamaan shuruudaha go'aamin jiray haddii magaalo ay na siinayso a "Xagaaga qabow" waa Calgary, Alberta; Edmonton, Alberta iyo Victoria iyo Vancouver oo ku yaal British Columbia. Magaalooyinka Kanada ee lagu daray qiimeyntan ayaa ah meelaha ugu waaweyn magaalooyinka waaweyn ee dalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Magaalooyinka Kanada ee leh cimilada ugufiican
Waad salaaman tahay, waxaan xiiseynayaa inaan ka shaqeeyo Victoria, ma aqaano sida ay macquul u noqon karto.
Jawaab Lourdes Rizo
Sawirka meeleynta Carmen Morales dijo
Waxaan ahay haweeney reer Mexico ah oo nabdoon
Waxaan fasax u haystaa inaan tago Kanada
Ma aqaano qof igu taageeri kara joogitaan inta aan shaqo helayo fadlan !!
Ku jawaab Carmen Morales
Waxaan jeclaan lahayn inaan ku noolaano Kanada. Ninkeygu waa qareen. Anigu waxaan ahay xisaabiye waxaanna leenahay 3 caruur ah oo 17 iyo 14 jir ah iyo ilmo 4 bilood jira. Waa maxay fursadaha?
Jawaab u dir María López
Fabiana, waxaan ahay isla xaaladdiina, magaaladee ayaad ka tihiin, waxaan ka fikirayay tagista Kanada laakiin waxa kaliya ee i walwal galiya ayaa ah inaadan cidna ku joogin halkaas Sikastaba, wali waa wadan horumaray
Odayga MILENA BASCOPE CASTRO dijo
Waa salaaman tahay, waxaan ahay Miilena oo reer Bolivia ah kana tirsan xirfadleyda ganacsi waxaan ka shaqeeyaa hay'ad maaliyadeed waxaanan aad u xiisaynayaa inaan aado Kanada maxaa yeelay mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan ayaa ka jira noloshayda iyo tan wiilkaygaba, runta ayaa ah in halkan Bolivia aan lagu qiimeyn qofka xirfadlaha ah, mushaharkuna aad u hooseeyo oo kuma filna xitaa inaad dhisato guri aad iska leedahay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku noolaado oo aan ka shaqeeyo Ontaariyo mid ka mid ah magaalooyinka Toronto, Windsor iyo Catharines
Jawaab ELDY MILENA BASCOPE CASTRO
Waxaan xiiseynayaa in aan aado Kanada si aan u noolaado una shaqeeyo Waxaan ahay aqoonyahan jaamacadeed oo 57 sano wadankeyga aan ku jirno da 'ahaan ma heli kartid shaqo wax kasta oo ninkayga ah iyo wiil ka yar 17 sano jir sida loo ogaado waxa loo sameeyo samee
Jawaab Lizbeth Engel
Waxaan jeclaan lahaa inaan raaco reerkayga si aan ugu noolaano Kanada, maxaan sameeyaa?
Jawaab Elvy Del Carmen Doria Ll
Fiid wanaagsan, waxaan ahay reer Kolombiya, magacaygu waa Jhon oo waxaan ahay macalin dhisme iyo maamule hawleed, waxaan jiraa 48 sano xaaskayguna waa 31 jir, waxaan haysanaa laba caruur ah oo yar yar, waxaan jeclaan lahayn inaan u safro Canada.
Ku jawaab Jhon jairo garcia
Paris Antonio dijo
Anigu waxaan ahay reer Mexico / Isbaanish ah oo degenaansho ku leh Mexico oo xiiseynaya inaan shaqo ka helo nijaar, (ugu yeer dhismaha ama qalabka guryaha). Waxaan leeyahay 12 sano oo khibrad ah.
Vancouver ama Toronto waa meelaha aan ugu jeclahay, laakiin waxaan u furnahay gobol kale.
Waan ku qanacsanahay wixii faallooyin ah.
Ku jawaab Paris Antoniano
Diana Duraan dijo
Waad salaaman tahay waxaan rabaa inaan shaqo u aado Kanada si layla soo xiriiro
Jawaab ku bixi Diana Duran
Taariikhaha muhiimka ah iyo ciidaha Morocco